Voina · Septambra, 2018 · Global Voices teny Malagasy
Voina · Septambra, 2018
Tantara mikasika ny Voina tamin'ny Septambra, 2018
Ejipta : Ravan’ny afo ny foiben’ny ‘’Antokon’ny Rahampitso’’
Ejipta26 Septambra 2018
Ho tohin’ny andiana trano may nitranga tao Ejipta dia indro entina amintsika indray ny tantaran’ny fahamaizana trano iray hafa izay nitranga tao amin’ny foiben’ny antoko politika Hizb al-Ghad (Antokon’ny Rahampitso) tao Kairo.
Azia Afovoany sy Kaokazy18 Septambra 2018
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana16 Septambra 2018
Mbola nisy indray ny fanafihan'ny mpampihorohoro iray hafa (28/01/2008) nikendry an'i Libanona izay nahafatesan'olona sy nahasimban-javatra. Namono ny manampahefanan'ny polisy iray mafana fo amin'ny ady amin'ny fampihorohoroana ao Libanona ny fiara iray voasesika baomba, tavela tao ny kapiteny Wissam Eid sy ny olona telo hafa.
Ny Rivodoza Mahery Indrindra Namely An'i Japana Tato Anatin'ny 25 Taona, Adino Tanteraka Noho Fisian'ilay Horohorontany Goavana Ny Ampitso
Azia Atsinanana14 Septambra 2018
Miady mafy ireo media mba handrakotra ny fifandimbiasan'ireo loza mahatsiravina, namela ny mponina hieritreritra hoe misy loza sasantsasany manakona ireo loza hafa tsy ho ao an-tsain'ny vahoaka.
Amerika Latina14 Septambra 2018
Namely mafy ny fanjakan'i Tabasco ny oram-batravatra izay niteraka tondra-drano . Tahaka izany no nitranga tamin'ireo loza voajanahary vao haingana izay nanohanan'ireo bilaogera miaraka tao Meksika ireo niharam-boina sy nampielezan'izy ireo ny vaovao momba ny fomba sy ny toerana hanaovana fanampiana.
Miatrika tondra-drano tsy mbola nisy toy izany i Shina, nisambotra vehivavy roa ho nampiely tsaho ara-pahasalamana ny manampahefana
Mpampiasa WeChat roa tao Shouguang, faritanin'i Shandong no nosamborina tamin'ny 25 aogositra 2018 noho ny fanaparitahana "tsaho" momba ny fihanaky ny aretina eny amin'ny biby fiompy noho ny tondra-drano goavana tao Shandong.
Nalahelo i Brezila satria lasa lavenona ny harena tranainy indrindra tao amin'ny Mozeam-pirenena
Amerika Latina09 Septambra 2018
Vaky fo ny Breziliana tamin'ny alahady 3 septambra taorian'ny nahamaizan'ny Mozea Nasionaly, ny tranainy indrindra ao amin'ny firenena ary azo antoka fa mpiambina ny tantara voajanahary sy ny angona haiolona (antropolojia) lehibe indrindra ao Amerika Latina.
Broney07 Septambra 2018
Egypta: Voina nitranga ao Doweiqa
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana04 Septambra 2018
Nanoratra momba ny loza nitranga tao Doweiqa izay nahafatesan'olona maherin'ny 30 noho ny fianjeran'ny vato ny bilaogera Egyptiana. Azo natao ve ny nisoroka ity loza ity? Ary nahoana no ireo olona fadiranovana indrindra hatrany no tratran'izany?